कृषि क्रान्ति: मिठो सपना, तितो यथार्थ — Imandarmedia.com
१जे नहुनु थियो त्यहि भयो ! राष्ट्रपति सी ले लिए कडा एक्सन, थाले यस्तो तयारी, अबे के गर्छन ओली ?
२सरकारलाई एकै दिन ४ झड्का
३थप २४४२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि,कति भए डिस्चार्ज ?
४प्रधानमन्त्री ओलीलाई लाग्यो ठूलो धक्का
५पूर्व माओवादी नेता रायमाझीले आफू कुन पार्टीमा छु भन्ने कुरा भुसुक्कै बिर्सिएपछि…
६प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको प्रक्षेपणः प्रधानमन्त्री देउवा कि माधव नेपाल ?
७गायक पशुपति शर्मा ए’क्कासी अस्पताल भर्ना; केछ स्वास्थ्य अवस्था ?
८४८ घण्टामा क्यान्सर ठीक पार्ने चामत्कारिक औषधि तपाई पनिअनिवार्य थापा उनुहोस
९बाबुराम भट्टराईको यस्तो एक ट्वीटले सामाजिक सञ्जालमा खैलाबैला
१०बाढीपहिरोमा परी अहिलेसम्म २२ बेपत्ता यति धेरैकाे मृत्यु, बल्ल खुल्याे यस्ताे रहस्य
११जसपा यी नेता भए आउट यस्ताे छ कारण
१२मेलम्चीमा राहत वितरणमा यस्ताे लफडा, बाढीपीडित बसेको ठाउँमा प्रवेश निषेध
गोरखा भूकम्पले दुख र पिडा दियो । त्यसपछि सुनियो, ‘विपदले विध्वंश मात्र गर्दैन, अवसरका ढोका पनि खोल्छ । लडेका घरहरु उठ्ने छन् । टाढिएका परिवारहरु जुट्ने छन् । गाउँ फेरी हराभरा हुनेछ । विकासको मूल फुट्नेछ ।’ यी मिठा कुराले केही हदसम्म भएपनि त्यो समय आशावादी बन्न कर लगायो । लगत्तै भारतले नाकाबन्दी गर्यो । भनिँदै आएको रोटीबेटीको सम्बन्धमा चिसो पस्यो । छिमेकीको व्यवहारबाट नेपाली चिढिए । उसले बेलाबखत देखाउने सदाशयतादेखि तर्सिए । अहिले सिमाना विवादले अर्को उल्झन थपेको छ ।
छिमेकीको धोकासँगै राष्ट्रवाद फेरि मुखरित भएको छ । ‘नगरौं अरुको भर । बन्नै पर्छ आत्मनिर्भर । युवाहरु जुट्नुपर्छ । आफ्नै देश बनाउन उठ्नुपर्छ ।’ फेरि भन्न थालिएको छ, ‘कृषि क्रान्ति गर्नुपर्छ । निर्यातमा जोड दिनुपर्छ । देशलाई समृद्ध बनाउनु पर्छ ।’ तर, यथार्थमा बिहान नुहाउँदा लगाएको स्याम्पुदेखि बेलुका सुत्नेबेला बाल्ने लामखुट्टे धपाउने धुपमा समेत मेड इन इण्डिया लेखिएको छ ।
कोरोना महामारीपछि फेरी पुरानै कुरा सुन्न थालिएको छ । विदेश गएका लाखौं युवा स्वदेश फर्किने छन् । गाउँ सम्झिने छन् । आफ्नै जमिनमा पसिना बगाउने छन् । स्वरोजगार बनेर समृद्ध देश बनाउन सहयोग गर्नेछन् । आशावादी हुनैपर्छ । किनकी भूकम्प र नाकाबन्दीको असर त नेपालमा मात्र थियो । थुप्रै देशले सहयोग गरे । पुननिर्माण करिब करिब सम्पन्न हुँदैछ । तर, कोरोना भाइरसले सिंगो विश्वलाई सताएको छ ।
विकसित देशमा नै बेरोजगारीको समस्या छ । जसको असर वैदेशीक रोजगारमा रहेका नेपालीमा पर्ने नै भयो । यता, नेपालमा पनि उद्योग, कलकारखाना करिब २ महिनादेखि बन्द छन् । विकासका आयोजनाहरु प्रभावित छन् । जसले अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पुर्याएको छ । उद्योगपति, व्यवसायीहरु नै टाउकोमा हात राखेर बसेका छन् । अझै पिडामा छन्, समाजको पिँधमा रहेका समुदाय । जो बन्दाबन्दीको दोश्रो दिनदेखि रोग र भोक दुबैसँग लडिरहेका छन् । दिर्घकालिन रुपमा पनि उनीहरु थप समस्यामा पार्नेवाला छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार गएको छ महिनामा खाद्यान्न, तरकारी एवं पेय पद्धार्थको मुल्य वृद्धिदर ९.७९ प्रतिशत छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा पनि विपन्न वर्ग परेका छन् । कोराना रोकथामका लागि लामो समय भएको बन्दाबन्दीले उनीहरुलाई अझै गरिबीको चेपटामा धकेलीरहेको छ । त्यसैले बेलैमा सचेत भएर कृषि क्रान्तिको लहर ल्याउने, रोजगारी बढाउने, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने तयारीमा जुट्नु हितकर देखिन्छ ।
यद्यपि, किसानका दुख दूर गरी भरपुर सुख र समृद्धि ल्याउन भनेजस्तो सजिलो छैन । एउटै लक्ष्य राखेर किसान, युवा, स्थानीय जनप्रतिनिधी र सरकारले तिव्र इच्छाशक्तिका साथ काम गर्ने हो भने यो असम्भव पनि होइन । तर, हरेक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुँदा कृषि र गरिबी निवारणको चर्चा हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको अर्थमन्त्रालयले बताएको छ । अर्थविद्हरु भने गरिब र सीमान्तकृतमैत्री बजेट आउने छाँटकाँट नभएको बताइरहेका छन् ।
जसरी विपन्न, दलित र सीमान्तकृतको साथका कारण राजनितिक आन्दोलनहरु सफल भएका छन् । त्यसैगरी हरेक खालको विकास निर्माण र आर्थिक क्रान्तिमा पनि उनीहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । त्यही देखेर नै विभिन्न देशले हाम्रा युवाहरुको श्रम किनीरहेको छ । कृषि क्रान्तिका लागि पनि यो समुदायको योगदान अत्यावश्यक छ । तर, विडम्बना, त्यही वर्गसँग कृषिको लागि अत्यावश्यक जमिनको स्वामित्व अत्यन्तै कम छ ।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०१८ मा प्रकाशित गरेको बहुआयामिक गरीबी सूचकांक अनुसार २८.६ प्रतिशत नेपाली गरीब छन् । एकिन तथ्यांक नभएपनि गरीबीको रेखामुनी धेरैजसो दलित र सीमान्तकृतहरु छन् । त्यस्तै, ६६ प्रतिशत नेपाली कृषि कर्मकै भरमा घर चलाउँछन् । उनीहरु मध्ये २६.१ प्रतिशत किसानसँग आफ्नो जमिन नै छैन । जमिनसम्बन्धी अनुसन्धाता डा. पूर्ण नेपालीको अध्ययनले १५.२४ प्रतिशत पहाडी र ४३.९८ प्रतिशत मधेसी दलितसँग जमिन नै नभएको देखाएको छ । यो हिसाब किताब नै कृषिमा विपन्न, दलित र सिमान्तकृत पिधँमै रहेको प्रस्टोक्ती हो ।
सरकारले वर्षैपिच्छे गरिबी निवारण, आधुनिक कृषि, स्वरोजगार भन्दै विभिन्न कार्यक्रम ल्याउँछ । अनुदानका लागि आवेदन दिन सूचना जारी गर्छ । व्यावसायिक फर्म भएकालाई बोलाइन्छ । प्राविधिक भाषामा लम्वेतान प्रतिवेदन लेख्नेका प्रतिस्पर्धा हुन्छ । सूचनाको पहुँच नभएका दिनभरी अरुको काम गरेर खाने गरिब किसानलाई स्थानीय सरकारले बाँडेको अनुदानबारे अत्तो पत्तो हुन्न । झन् जमिनै नभएको विपन्न परिवारका लागि सरकारको त्यो कार्यक्रम कागलाई बेल पाकेजस्तै छ । फलस्वरुप स्थानीय जनप्रतिनिधीका आसेपासेलाई स्वाद परिरहेको छ ।
अनि धन भएकाहरुले फर्म खोलेर सरकारी अनुदानमा रजाईं गरिरहेका छन् । आगामी चुनावमा भोट बटुल्न मद्दत मिल्ने भएकाले जनप्रतिनिधीहरु पनि मख्ख छन् । लाग्छ, सरकार एउटा बिरुवामा मल र पानी हालिरहेको छ । अनि अर्को बिरुवा बढ्दै बढेन भनिरहेको छ । पहुँचवालालाई पोसेर किन विपन्नहरुको पेट र पुन्तुरो जति नै गरे पनि भरिएन ? भनेर प्रश्न गरिरहेछ । यही व्यवस्थाको निरन्तरताले कृषि फर्महरु थपिएलान् । केही युवा रोजगार बन्लान् । विपन्न, दलित र सिमान्तकृतको स्थिति ज्यूँका त्यूँ रहन्छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना हावा भरेको बेलुन जस्तो मात्रै हुनेछ । त्यसैले धन भएकालाई भन्दा मन भएका किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
परिस्थिति फेरिँदैछ, पहिला ज्यालामा अन्न दिँदा आनाकानी गर्ने खेताला अहिले पैसा लिनुपर्दा पछुतो मान्न थालेका छन् । यसको मतलब गाउँघरमा पैसाको भन्दा अन्नको महत्व बढ्दैछ । शहर बजारमा अहिलेसम्म त गोजीमा पैसा भएपछि सबथोक किन्न पाइन्छ । त्यसैले त गाउँमा भएको बिघौं बिघा जमिन बाँझो छाडेर प्याकेटको बास्मति चामलमा रमाउँछन्, जमिन्दार । भोलीका दिनमा उत्पादनमै ह्रास आएर विश्वमै खाद्यान्न अभाव नहोला भन्न सकिन्न । किनकी खाने मुखको व्यापक रुपमा वृद्धि भइरहेको छ । खेतीयोग्य जमिनमा अन्न होइन गगनचुम्बी महलहरु तिव्र गतिमा उम्रिरहेका छन् ।
पैसा र जमिन हुनेहरु अहिलेसम्म निर्धक्क छन् । यी दुबै नहुनेहरु बन्दाबन्दीको दोश्रो दिनदेखि छट्पटाइरहेका छन् । ती यस्ता वर्ग हुन् जसलाई मिठा सपना देखाएर सशस्त्र द्वन्द्वको सारथि बनाइयो । राजनितिक क्रान्ति सफल पार्न मैदानमा उतारियो । अनि खोला तरेपछि लौरी बिर्सेजस्तै छाडिएको छ, अचेल । जसरी देशले बेवास्ता गर्यो, अब आर्थिक संकटका कारण विदेशले पनि उनीहरुको पसिना किन्ने कष्ट नगर्न सक्छ । उनीहरुले आफ्नै मुलुकका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्छन । त्यसैले अहिले त्यही सर्वहारा वर्गको आडमा उभिएको पार्टी सरकारमा छ । विगतमा विपन्न, दलित र सिमान्तकृतले लगाएको गुन तिर्ने उसलाई यो गतिलो मौका पनि हो ।
यसको लागि सबैभन्दा पहिला स्थानीय तहले गरिब तथा विपन्नको सीप, दक्षतासहितको तथ्यांक संकलन गर्नु पर्ने देखिन्छ । देशमा कृषि क्रान्ति नै गर्ने हो भने राजनितिक दर्शन भन्दा माथि उठेर विज्ञहरुका सुझाव सुन्नु पर्छ । सुन्ने मात्र होइन त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
चुनावको समयमा घर घर पुग्न सक्ने जनप्रतिनिधीको इच्छाशक्ति हुने हो भने यो काम थोरै बजेटमा सहजै सम्पन्न हुनसक्छ । कृषि ज्ञान केन्द्रको औचित्यबारे पुर्नविचार गरी किसानको लागि स्थानीयस्तरमा प्रभावशाली कृषि पाठशालाको आवश्यकता छ । जहाँ उनीहरुले बाली लगाउने तरिका सिक्न पाउन, विदेशमा अपनाइएका आधुनिक प्रविधिबारे ज्ञान आर्जन गर्न सकुन् ।
गोड्दै गरेको बाली छाडेर प्राविधिकलाई खोज्न स्थानीय तह धाउन नपरोस् । किसानले बालीमा बगाएको पसिनाको करिष्मा हेर्न प्राविधिकहरु नै प्रफुल्ल मनका साथ खेतबारीमा पुगुन् । मल, बीउ, विजनको चिन्ता नहोस् । कृषि विकासका लागि सरकारसँगै गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्र पनि क्रियाशील छन् । प्रभावकारी काममा उनीहरुलाई लगाउन सरकार चनाखो हुनपर्छ । भने अनुसार काम भएको छ छैन अनुगमन र मूल्यांकन गरी लक्षित समुदायमा प्रभावकारी काम गराउनु पर्छ ।
कृषकमा सूचनाको पहुँच अर्को महत्वपूर्ण कुरा हो । स्थानीय संचारमाध्यमलाई हामीले यो कुरामा खासै उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं । संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालय पाँच मिनेटको भिडियो सन्देश बनाउन लाख लाख खर्च गर्छ । अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था आधा घण्टाको सामाजिक फिल्म बनाउन लाखौं खर्चिन्छन् । तर, भिडियोको पहुँच र प्रभावकारिताबारे मतलब कसलाई ? त्यो रकमले स्थानीय तहमा रहेको एउटा सामुदायिक रेडियोले वर्ष दिनसम्म विभिन्न विषयमा गज्जबका कार्यक्रम बजाउन सक्छ ।
पिँधमा रहेकाहरुको आवाजलाई सरोकारवालासम्म पुर्याउन सक्छ । आवश्यक सूचनासँगै कृषि कर्मका सफल अभ्यासलाई प्राथमिकता दिन सक्छ । किसानका समस्याबारे सरोकारवालालाई जमघट गरेर बहस र पैरवी गर्दै समाधानको लागि ताकेता गर्न सक्छ । तर, खै किन हो विरुवामा होइन, बालुवामा पानी हाल्दा नै खुशी देखिन्छन्, संघ संस्थाका प्रतिनिधि र कर्मचारी ?
किसानको मुख्य काम कृषि उपज उत्पादन गर्ने हो । तर, हाम्रा किसानलाई पसिना बगाउँदा भन्दा तरकारी नबिक्दा बढी पीडा हुन्छ । दिनरात मेहनत गरेर फलाएको कृषि उपजलाई आयातित सामग्रीले उछिन्छ । यस्तो परिदृष्यले कृषि पेशामा आर्कषित गर्छ कसलाई ? त्यसैले किसानलाई कृषि उपज उत्पादनको मात्रै जिम्मा दिनुपर्छ । जति सक्दो धेरै फलाउ, बजारको चिन्ता नलेउ भनेर ढुक्क बनाउन सक्नुपर्छ । बजारीकरणको संजाल बनाएर देशदेखि विदेशसम्म पुर्याउन सक्ने संयन्त्र खडा गर्नुपर्छ । होइन भने कृषि पेशाले गरिब र विपन्नलाई राहत होइन आहत पुर्याइरहन्छ । बिचौलियाको बजार राजनितिले गरिब किसानलाई मर्कामा पारीरहन्छ ।
त्यसैले कृषि पेशा अपनाएपछि कम्तिमा वर्षदिन ढुक्कले खान पुग्ने अनि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक कर्म गर्न अरुको भर पर्नु नपर्ने कुराको सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । त्यसपछि मात्र कृषि पेशाले विपन्न, दलित र सीमान्तकृत युवाहरुलाई तान्न सक्छ । खाद्यान्नको मागलाई धान्न सक्छ । भोकमरीबाट बचाएर सम्पन्नताको यात्रातर्फ उन्मुख गराउन सक्छ । होइन भने नेपालमा कृषि क्रान्ति फगत सपनामै सिमित रहन्छ । बिर्सनै नहुने कुरा, श्रम गर्ने वर्गलाई समेट्न नसके कृषि क्रान्ति, हतियार बिना युद्धको कल्पना गरेजस्तो मात्र हुनेछ ।
मदन भण्डारीका हत्यारा किन खोज्दैनन् विद्या र केपी ?